A na-akwado Meizu 16s Pro na ụgwọ ngwa ngwa 24-watt | Gam akporosis
Dị adị nke Meizu 16s Pro na ngwa ngwa ngwa ngwa 24-watt gosipụtara
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Meizu anaghị arụ ọrụ dị mma na China, isi ahịa ya, ọ ka na-arụsi ọrụ ike ma na-achọsi ike igosipụta onwe ya ma ebe ahụ ma n'akụkụ ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji akwadebe ọhụụ ọhụrụ nke usoro 16 ya, nke ndị ahịa nabatara nke ọma.
Ama ọzọ anyị na-ekwu maka ya bụ Meizu 16s Pro, na anyị nwere data mbụ gbasara ya nke na-akwado ụbọchị mbido nso ya maka ụlọ ọrụ asambodo ndị China 3C.
Ngwaọrụ edepụtara na nso nso a na nchekwa data ahụ bụ Meizu M973Q. Ọ bụ ezie na ọ naghị ebu aha azụmaahịa-nke bụ Meizu 16s Pro-, enwere okwu na ọ bụ nke ekwenti akpọtụrụ aha, ọ bụkwa na asịrị ndị sitere na ya na-ezo aka na ya.
Ọtụtụ mgbe, ahụ 3C na-akwado ọnụ ya na ihe na-ebu batrị ngwa ngwa yana chaja nke ngwaọrụ ọ gafere n'aka ya. N'ihi usoro ọrụ ya, o mere ka anyị mata nke ahụ chaja ọnụ na-abịa na nkwado maka teknụzụ na-ebu ngwa ngwa 24 watt.
El Meizu 16 Ọ bụ njedebe dị elu nke na-eji ihuenyo AMOLED nke 6.2-anụ ọhịa na mkpebi FullHD + nke 2,232 x 1,080 pikselụ na nha 18.5: 9. Ọ na-akwadebekwa ihe Snapdragon 855 site na Qualcomm, SoC nke ruru arụ ọrụ kachasị nke 2.84 GHz na ọ bụ 7 nm. Ngwaọrụ a na - esikwa na ebe nchekwa RAM 6/8 GB na oghere nchekwa dị n’ime 128/256 GB, n’otu n’otu.
Otu onye ọrụ chọpụtara na Snapdragon 855 na Meizu 16S ya enweghị nrapado
Dabere na njirimara na njirimara teknụzụ akọwapụtara, anyị nwere ike ịtụ anya àgwà ka mma na Meizu 16s Pro, dịka, dịka ọmụmaatụ, ihuenyo mkpebi dị elu nke nha 19: 9 ma ọ bụ 19.5: 9 na chipset ọhụrụ Snapdragon 855 Plus n'ime na ndị ọzọ. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-ekpughere ya ihe niile, ya mere ọnụ ahịa ya na nnweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Dị adị nke Meizu 16s Pro na ngwa ngwa ngwa ngwa 24-watt gosipụtara
Nwunye 30 Lite ga-abụ Huawei mbụ na HarmonyOS
LG G8X ThinQ na-awụpụ n'ihu ngosi ya